हाम्राे पिपलबाेट » एमाले विवाद मिलाउन नौ सदस्यीय कार्यदल गठन, को-को परे ? एमाले विवाद मिलाउन नौ सदस्यीय कार्यदल गठन, को-को परे ? – हाम्राे पिपलबाेट
एमाले विवाद मिलाउन नौ सदस्यीय कार्यदल गठन, को-को परे ?
एमालेको विवाद समाधानका लागि नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । पछि दुई जना सदस्य थप्ने गरी नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।